अस्ट्रेलिया कर्म थलो बनाएकी गायिका स्मृति पोखरेलको नामका अगाडी अरु पनि परिचय झुन्डिन्छन् । नर्स, मोडल, नायिका । केही पहिले हट् फोटो सुट गराएर चर्चामा आएकी स्मृति विशेषगरी पप गीत र रक गीत गाउँछिन् । उनले केही म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरेकी छिन् । उनले अभिनय गरेको चलचित्र चक्कर रिलिज हुने क्रममा छ । उनको पहिलो एल्बम सफर आईसकेको छ । दोस्रो एल्बम पपस्टार पछि उनी अझ चर्चामा आईन् । स्टेज प्रोगाम तताउन उनी माहिर छिन् । पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी :
मलाई गर्मी नै एकदम मनपर्छ । गर्मीमा पनि सिरक ओढेर सुत्न मनपर्छ भने जाडोमा कस्तो ।
नेपाल मनपर्छ कि अस्ट्रेलिया ?
अबश्य नै नेपाल । नेपाल जस्तो स्वर्ग अन्त कहाँ छ र संसार ?
सबैभन्दा बढी दोहोर्‍याएर गएको देश कुन हो ?
जापान तीन चोटी, संयुक्त अरब इमिरेट्स सात चोटी, कतार चार चोटी पुगेकी छु । त्यसबाहेक मलेसिया पनि धेरै पटक पुगेकी छु । बहराइन, दक्षिण कोरिया, हङकङ, सिंगापुर पनि दोहोर्‍याएर पुगेका मुलुक हुन् । महिनामा एक पटक उडिन भने बिरामी नै हुन्छु ।
घुम्न कहाँकहाँ जान मन छ ?
सबैभन्दा लामो फ्लाइट कुन थियो ?
अस्टेलियाबाट अमेरिका जाँदा एक पटक २४ घण्टा भन्दा बढी यात्रा भयो । सुरुमा १८ घन्टा भयो । जम्मा तीन ठाउमा ट्रान्जिट थियो ।
त्यो त प्रोगाम हेरेर हुन्छ । ठाउ र आयोजक हेरेर पनि निर्धारण हुन्छ । कहिलेकाहीं सामाजिक सेवाका लागी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हुन्छ । जापानमा स्टेज शो गरेको ५ लाख रुपैंयाँसम्म लिएको छु । टिप्स धेरै आएर त्यति भयो ।
त्यो त एक लाख देखी १० रुपैंयाँसम्म जति पनि हुन्छ ।
किनेका मध्ये किनेको महंगो चिज कुन हो ?
मैले भारत जाँदा एक पटक फोटो सुट गरिएको थियो । त्यो लेहेंगाको ५ लाख रुपैंयाँसम्म पथ्र्यो । ज्वेलरी पनि यस्तै २ लाखको थियो । दुबै लगाएर मैले सुटिङ गरेपछि मलाई नै त्यो उपहार दिईयो । आफूले किन्नुपर्दा पनि ७ लाख रुपैंयाँ त पथ्र्यो नै ।
मोबाइल कत्ति फेर्नुभयो ?
मेकअपमा मात्रै १ लाख रुपैंयाँ जान्छ । ब्राण्डेड सामान किन्दा बढी खर्च हुन्छ । कहिलेकाही १० हजार पनि खर्च हुदैन कहिलेकाही १० लाख रुपैंयाँसम्म पनि पुग्छ । यत्ति नै भन्ने त छैन । कस्मेटिक, गाजलमा बढी जान्छ ।
ममीलाई । घरी हास्ने, घरी रिसाउने मुड हुन्थ्यो ।
फिल्म हेर्दाहेर्दै कुनै हिरोसँग प्रेममा पर्नु भएको छ कि ?
छैन । स्क्रीनमा हिरोलाई देखेर कहा प्रेम पर्छ र ?
कुनै हिरोसँग डेट जान पाए को सँग जानुहुन्थ्यो ?
सपना त देखेको छैन । तर राम्रो लाग्छ ।
अभया सुब्बाका ‘तिम्रो लागी’ ।
रुन्छु । चित्त दुख्दा रोईराहुन्छ ।
मानिसको मनमा जान सकिदैन । खै, उहाँहरुलाई के लाग्छ ठ्याक्कै थाह छैन । तर मेरो अगाडी भने आखाको नै तारिफ गर्नुहुन्छ ।
प्रेम विवाह । तर प्रेम विवाहलाई मागि विवाहमा परिणत गर्नुपर्छ । आमाबुबासँग छलफल गरेको राम्रो हो । जात मिल्नुपर्‍यो, मन मिल्नुपर्‍यो, परिवारको स्वीकृति मिल्नुपर्‍यो । त्यही राम्रो हो ।
खुलाउँन मिल्छ ?
मिल्छ । मेरो जीवनसाथी गिरिश शर्मा । उहा पिएचडि डाक्टर हो । पेशाले आइटी इन्जिनियर हो । उहाको नाममा । हि इज् भेरी स्वीट गाइ । मैले भन्दा बढी उहाले माया गर्नुहुन्छ ।
नेपालमा कहाँकहाँ घुम्न जान मन छ ?
अबश्य छ । ज्योतिषको कुरा सुन्न मन लाग्छ । उहाले भने अनुसार काम गर्न मन लाग्छ । यो औंठी पनि ज्योतिषले भनेर लगाएको हो । मलाई एकदम फापेको छ ।
अस्ट्रेलिया बस्दा के कुरा मिस हुन्छ ?
पहिलो कुरा परिवार । त्यसपछि आफन्त, साथीभाई मिस गर्छु । खानेकुराहरु, त्यसमा पनि स्पाईसी फुडहरु । आलुचप, चिकेन यहाँको जस्तो त्यहा स्वाद पाइदैन ।
तपाईं बाहिर निस्किँदा पर्समा कति पैसा बोक्नुहुन्छ ?
कहिले सय रुपैंयाँ मात्र हुन्छ, कहिले १ लाख पनि हुन्छ । यत्ति नै भन्ने हुँदैन । एटिएम कार्ड हुन्छ, त्यो जहिले पनि चलिहाल्छ ।
तपाई विवाहित हुनुहुन्छ । तैपनि कसैले फेरी प्रेम प्रस्ताब राख्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
तपाईलाई कस्ता खालका पुरुषहरुले आकषर्ण गर्छन् ?
जोन अब्राहम जस्ता पुरुषहरुले । गोरो, कालो, अग्लो, होचोले फरक पार्दैन । मन सफा हुनुपर्‍यो । त्यो मनले यो मनलाई माया गर्नुपर्‍यो ।
तपाईंलाई चलचित्रममा खेल्ने प्रस्ताब आएको छैन ?
छ नि । तर समय नमिलेर हो ।